Ololaha Caasimada - Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Xarunta Caafimaadka ee Sadler waxay bilawday olole lacag ururin ah oo dhan $4 milyan si loo kordhiyo adeegyada
Foomka Ballanqaadka Deeq-bixiyaha
Ololaha Koriinka ee Diyaarsan…Dejinta…Waxa uu Sadler ka caawin doonaa in uu adeegyadiisa gaadhsiiyo Bariga Cumberland County. Sadler, Xarunta Caafimaadka ee Federaaliga ah, waxay bixisaa daryeel la heli karo, la awoodi karo, dhamaystiran, dhaqan ahaan karti si ay u buuxiso baahida bulshada aan la daboolin, caymis la’aanta iyo soogalootiga gudaha Cumberland iyo Perry Countys.
Diyaar ayaan nahay. . . Annaga oo 100 sano u adeegay bulshada, waxaanu nahay daryeel bixiye doorasho oo bixiya adeegyo caafimaad oo isku dhafan oo dhammaystiran, adeegyada ilkaha, adeegyada caafimaadka dabeecadda, iyo adeegyo taageero dheeraad ah.
Waxaan nahay Set . . . Cilmi baaris ayaa muujisay xaqiiqooyin soo jiidasho leh oo nagu jiheeyay meel ku taal Xeebta Galbeed. Gobolka Bari ee Cumberland oo keliya waxa ku nool 147,358 qof:
Dadka deggan dakhliga yar, 25,917, ayaa ah 18% wadarta guud.
In ka badan 88% dadkan ayaa ahaa kuwo aan loo adeegin ama ma helin daryeel.
Sannadkii 2018, qiyaastii 5,711 qof oo ku nool qaybtan ka tirsan gobolka oo keliya ayaan caymis lahayn.
1,000 bukaan oo Sadler ah ayaa u socdaalay Carlisle daryeelka aasaasiga ah.
Waxaan ka soo iibsannay dhismo hadda ku yaal Mechanicsburg, laakiin waxay u baahan doontaa dayactir. Ololuhu wuxuu hubin doonaa mustaqbalka daryeel la heli karo oo aad u wanaagsan.
Nagu caawi Koritaanka . . . Dhamaystirka ololahayaga si guul leh wuxuu yeelan doonaa faa’iidooyin badan. Xarunta cusub waxay kordhin doontaa adeegyada bulshooyinka aan hadda helin daryeel. Bukaanka hadda lagu adeego Xaruntayada Carlisle waxay heli doonaan adeegyo isku mid ah oo guriga u dhow. Tani waxay xoraynaysaa awoodda ay ugu adeegto xitaa bukaanno badan oo ku nool bulshada weeyn ee Carlisle. Intaa waxaa dheer, furitaanka Mechanicsburg waxay ka dhigan tahay:
Booqashooyinka qolka degdega ah oo yar.
Caawi inaad ku socoto diiwaan gelinta caymiska adag iyo faa’iidooyinka.
Shaqaale ka caafimaad badan, ku guulaysta shaqada iyo ardayda dugsiyada.
Fursadaha tababarka ee caawiyayaasha caafimaadka iyo ilkaha.
“Goob ku yaal Waddada Trindle, waa meesha ugu fiican – oo ah wadnaha baahida ugu weyn. Waa xarun caafimaad oo xirfad leh oo bukaanku ay ku faani doonaan inay booqdaan dhammaan baahiyahooda daryeel caafimaad. Waxay noqon doontaa xudunta udub-dhexaadka u ah adeegyada dhamaystiran, ayay tidhi Manal El Harrak, maamulaha xarunta caafimaadka ee Sadler.
Waad ka dhigi kartaa tani inay dhacdo! Hadiyadaha – kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar – ee ololahan waxay jebin doonaan caqabadaha gelitaanka oo u furi doona albaabada Xarunta West Shore ee bulsho caafimaad qabta oo dhan. Ballanqaadyada waxaa lagu qaataa lacag bixinta ilaa saddex sano. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan kala xidhiidh Laurel Spagnolo, Agaasimaha Horumarinta & Ka-qaybgalka Bulshada, 717.960.4333 ama iimayl ahaan, lspagnolo@sadlerhealth.org .
Waxaanu ku martiqaadaynaa oo aanu soo dhawaynaynaa hadyado heer walba ah, oo leh fursado magac-bixineed oo la heli karo oo u dhexeeya $1,000,000 ilaa $25,000. Ballanqaadyada saddexda sano ah ayaa la door bidaa. Dhammaan hadiyadaha kale ee u dhexeeya $1,000 iyo $24,999 waxa lagu aqoonsan doonaa tabeelka Deeqaha oo la dulsaaray gidaarka caanka ah ee dhismaha cusub. Ikhtiyaarada hadiyadaha la magacaabay waxaa ka mid ah:
Macluumaad dheeraad ah ayaa laga helayaa:
Agaasimaha Horumarinta & Is-dhexgalka Bulshada
Xarunta Caafimaadka ee Sadler » Siyaabaha wax loo bixiyo – Qalbi u yeelo Sadler! » Ololaha Caasimada